Dima Al Khatib Mahatsiaro an’i Hugo Chavez · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2013 15:35 GMT
@Dima_Khatib: Vao nahafantatra an'i Hugo Chavez aho tamin'ny Septambra 2002 tao Caracas, mihoatra ny folo taona izao. Nitarika tafatafa manokana dimy niaraka taminy aho ary nandeha tamin'ny dia rehetra nataony nanerana izao tontolo izao
@Dima_Khatib: Izaho irery no mpanao gazety vahiny, ary indraindray aza ny hany mpanao gazety, niaraka tamin'i Chavez nandritra ny diany tao Venezuela sy tany ivelany
Ho valin'ny fanontaniana raha tia azy ny vahoakan'i Venezoela, namaly i Khatib:
@Dima_Khatib: Eny, fantatro. Misaritaka ny hevitry ny Arabo. Tokony halahelo ve isika sa tsia amin'ny fahalasanan'i Chavez? Anisan'ny tena vitsy nanohana ny Palestiniana amin'izao vanim-potoana izao izy. nefa averina indray, tsy nanohana ny fitroarana Arabo izy.
@Dima_Khatib: Mety hanoratra boky momba ny zava-niainako sy ny adi-hevitra isan-karazany nifanaovako tamin'i Chavez aho.. nihoatra ny 10 taona .. ary mety tsia. Tsoriko fa tena tsy fantatro.